ဗမာ | مدرسة مقاطعة لانكستر
الرئيسية / اكتشف SDoL / تنوع / اللغات / ဗမာ
لانكستر ၏ ကျောင်း ခရိုင် ရှိ ပညာရေး
لانكستر ၏ ကျောင်းစာအုပ် ခရိုင် အများပြည်သူ ကျောင်း စနစ် ဖြစ်ပါတယ်။ ကလေး တိုင်း အ ဘယ်သူ မျှ မ ကုန်ကျ မှာ အများပြည်သူ ကျောင်းကို သွားဖို့ ပိုင် ခွင့် ရှိသည်။ لانكستر ၏ ကျောင်း ခရိုင် မှာ ကလေး တစ် ဦး ကျောင်းအပ် ဖို့ ဘာတွေလိုအပ်သလဲ؟ သ ငျ သ ညျ ကျောင်းများတွင် တွေ့မြင် လူများ သည် အ ဘယ်သူ နည်း သင် တစ် စိုးရိမ် ပူပန် မှု သင့် တစ်ခု ရှိပါတယ် လျှင် သင် ဖို့ ပြောဆို ပြောဆို؟ အ ဘယ်အရာ ကို နှစ်အရွယ်မှာ ကလေးများ ကျောင်း က ابدأ နှင့် ကျောင်း တစ်ရက် ဘယ်လောက် ရှည်လျား ပါသလဲ သင့် ကလေး ကျောင်း ပျက် ရ လျှင် အ အ သနည်း ငါတို့သည် သင်တို့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ရှိ ကျောင်းတစ်ကျောင်း ပြောင်းလဲ ကူညီရန် အဖြေတွေကို နှင့် အရင်းအမြစ်များ ရှိသည်။
ကွဲပြား ခြားနား သော အသက်အရွယ် ၏သား သမီး တို့ အ ဘို့ ကျောင်း မျိုး ရှိပါတယ်:
မူလတန်းကျောင်း: ပဉ္စမ တန်း မှတ ဆင့် အသက်အရွယ် 5
အ လယျပိုငျး ကျောင်း: အဆင့် 6-8
المدرسة الثانوية တွင်: အဆင့် 9-12
အမေရိကန် ကျောင်းမှာ တစ်နှစ် သြဂုတ်လ နှောင်းပိုင်း က စတင်ခဲ့သည် နှင့် ဇွန်လ အစောပိုင်း အတွက် အဆုံးသတ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျောင်း နှစ်အတွင်း ကလေးများ၏ သောကြာနေ့ မှတ ဆင့် တနင်္လာနေ့ ကျောင်းတက်။ ကလေးများ စနေနေ့ နှင့် တ နင်္ ဂ နွေ ကျောင်း မ သွားကြ ပါဘူး။
ဆရာများ နှင့် ဝန်ထမ်း
ကျောင်း အတွက် လူတိုင်း ကျောင်းသားများကို ပညာပေး အတွက် အခန်းကဏ္ဍ မှ ပါဝင်သည်။ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ، ဆရာများ နှင့် ကျောင်း ဝန်ထမ်းများ: ဒါဟာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကျောင်းများ အတွက် အမျိုးမျိုးသော အခန်းကဏ္ဍကို နားလည် သဘောပေါက် ရန် အရေးကြီးပါသည်။
အင်္ဂလိပ် စာ သင်ယူ
အင်္ဂလိပ် ထက် အခြား တစ် ဦး ပထမ ဦး ဆုံး ဘာသာစကား နှင့် အတူ ကျောင်းသားများ က သူတို့ ကျောင်း ရဲ့ အင်္ဂလိပ်ဘာသာ ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ် မှာ ပါဝင် ဖြင့် အင်္ဂလိပ်ဘာသာ အင်္ဂလိပ်ဘာသာ စကား ကျွမ်းကျင်မှု တိုးတက် စေ နိုင်ပါတယ်။ ကျောင်းသားများ သူတို့ ELD န်ဆောင်မှု များအတွက် အရည်အချင်း ပြည့် မှီ ခြင်း ရှိမရှိ ဆုံးဖြတ်ရန် ကျောင်းအပ် ၏ အချိန် က အကဲဖြတ် နေကြသည်။
لانكستر ၏ ကျောင်းစာအုပ် ခရိုင် ဗဟို စာရင်းသွင်း ရန် PA ဆိုပြီး 17603. ، 251 တောင် မင်းသား လမ်း ، لانكستر မှာ တည်ရှိပြီး ကွိုဆို ရေး စင်တာမှာ အားလုံး ကျောင်း က အဆောက်အ ဦး များအတွက် ကြောငျး သား ဆောင်ခဲ့ ကျေးဇူးပြုပြီး: ကလေး၏ အ သက်သက် သေ ပြ ، လိုအပ်သော ကာကွယ်ဆေး ထိုး ပေးခြင်း ၏ သက်သေများ နှင့် လိပ်စာ အထောက်အထား။
SDoL အတွက် စာရင်းသွင်း
ခ ငြ့်အရေး & တာဝန်များ
အမေရိကန် ကျောင်း စနစ် အတွက် ကလေး တစ် ဦး နှင့် အတူ မိဘ တစ် ဦး အဖြစ် ، သ ငျ သ ညျ အခွင့်အရေး နှင့် တာဝန်ဝတ္တရား နှစ်ခု လုံး ရှိသည်။ ပိုမို လေ့လာ သင်ယူ ဖို့ အောက်က ကို ကလစ် နှိပ်ပါ။
အင်္ဂလိပ် ထက် အခြား တစ် ဦး နေအိမ် ဘာသာစကား နှင့် အတူ မိဘများ သို့မဟုတ် အုပ် ထိန်း သူတို့၏ နှစ်သက်သော ဘာသာစကား မှာ ကျောင်း က သတင်းအချက်အလက် ရယူ ပိုင် ခွင့် ရှိသည်။ ဘာသာစကား အဓိပ္ပာယ် ကောက် ယူန် ဆောင်မှု ကို တောင်းဆို ဖို့ ، ဒီ ပထမ ဦး စွာ ဘာသာစကားကို သတ်မှတ်ခြင်း بطاقة ကို ဒေါင်းလုတ် လုပ် ، သင်၏ ကျောင်း ရဲ့ အဓိက ရုံးမှ ပစ္စုပ္ပန်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ရှိ، ကျောင်းသားများ နေ့စဉ် နေ့တိုင်း ကျောင်းသို့ သွားကြ ဖို့ လိုအပ်သည်။ .
ကျောင်းသားများ بنسلفانيا ပြည်နယ် ကျောင်းများ သို့ တက်ရောက်ရန် နိုင်ရန် အတွက် အချို့သော ကာကွယ်ဆေး လက်ခံရရှိ ရန် လိုအပ်သည်။ အ ကြှနျုပျတို့ သ ညျ သ ငျ လို အ ရာ لقاحات ကို သိ ကူညီရန် နှင့် လိုအပ်ပါက ، သင်၏ သားသမီး ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ပံ့ပိုး ပေး တွေထဲက နေ ဖြင့် ကာကွယ်ဆေး ထိုး ခြင်းကို ကူညီပေး နိုင်ပါသည်။
လိုအပ်သော ကာကွယ်ဆေး ထိုး
မူလစာမျက်နှာ ကို AT သင့် ကလေး ကူညီထောက်ပံ့မှု
သ ငျ သ ညျ မိဘ တစ် ဦး အဖြစ် ، သင်သည် သင်၏ ကလေး၏ ဘာသာစကား နှင့် ပညာရေးဆိုင်ရာ တိုးတက်မှုကို ထော ကျ ပံ့ ကူညီပေး နိုင်သည် ကို ဘယ်လို ، အံ့ သြ လိမ့် မည်။ အချို့ မဟာဗျူဟာ များ အ ဘို့ အောက်က رابط ကို ကလစ် နှိပ်ပါ။ ကလေး သင့် ရဲ့ အကူအညီ နှငျ့ နဲ့အတူ ပိုပြီး အောင်မြင်တဲ့ ဖြစ် လိမ့် မည်!
သင့် ကလေးကို ထောက်ပံ့
لانكستر ၏ سيتي နှင့် ကျောင်း ခရိုင် ဘာသာစကား ဖွံ့ဖြိုးရေး، ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု နှင့် ဒုက္ခသည် အဆင့် အတန်း နှင့် အတူ ကူညီ ပေးဖို့ သင့် ကလေး၏ ကျောင်းမှ ပြင်ပ အရင်းအမြစ်များ နံပါတ်ကို ဆက်ကပ်။ သ ငျ သ ညျ အ ကူညီ ရ နိုင် နည်းလမ်းတွေ များ စာရင်းကို အောက်တွင် ဖော်ပြထားသည်ကို ကလစ် နှိပ်ပါ။
ပို များသော အရင်းအမြစ်များ
သင် القائمة က နေ ရွေးချယ် မိခင်ဘာသာစကား အတွက် ပုံနှိပ် ထုတ်ဝေသော စာမျက်နှာ ကြည့် ရှု နေကြသည်။ တစ်ခုလုံးကို site ကို ဘာသာပြန်ဆို ရန်، စာမျက်နှာ ၏ ထိပ် မှာ القائمة المنسدلة က နေ သင်နှစ်သက်တဲ့ ဘာသာစကားကို ရွေးချယ် ပါ။
နောက် ကျော ထိပ်တန်း မှ
ကွဲပြား ခြားနား သော အသက်အရွယ် ၏သား သမီး တို့ အ ဘို့ ကျောင်းတွေ ရှိပါတယ်:
(စက်တင်ဘာလ 1 ရက်နေ့တွင် သို့မဟုတ် မတိုင်မီ) အသက်အရွယ် 4
မ လိုအပ် ပေမယ့်အကျိုးရှိ မ ရ
ရ ရှိနိုင် အမတ်နေရာ လီမိတက် အရေအတွက်ကို
5 မှတ ဆင့် သူငယ်တန်း (5) ကြိမ်မြောက် တန်း
အများစုမှာ မူလတန်းကျောင်း များ 3:15 مساءً အချိန်မှာ 8:45 مساءً တွင် နှင့် အဆုံးမှာ နေ့ရက် တိုင်း ကို စတင်
အများစုမှာ အလယ်တန်း ကျောင်းများ 7:45 مساءً မှာ စတင် နှင့် 2:45 مساءً မှာ အဆုံးသတ်
7:50 مساءً မှာ စတင် နှင့် 3:00 مساءً မှာ အဆုံးသတ် ထားသည်။
ဆရာ / န်ထမ်း အခန်းကဏ္ဍ
အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ ကျောင်းသားများကို သင်ပေး ကြ ဘူး။ သူတို့ က ကျောင်းတာဝန်ခံ ၌ ရှိ ကြ၏။ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ အမျိုးမျိုး ရှိပါတယ်:
ကြီးကြပ်ရေးမှူး: အဆိုပါ အုပ်ကြီး တစ်ခုလုံးကို ကျောင်း ခရိုင် ကြီးကြပ်။
ကျောင်းအုပ်ကြီး: ခရိုင် အတွင်းရှိ တစ်ခုချင်း စီ ကို ကျောင်း က ကျောင်း ကြီးကြပ် သူ တစ် ဦး ကျောင်းအုပ်ကြီး ရှိပါတယ်။ ကျောင်းအုပ်ကြီး ဆရာ ، ဆရာမ ، ကျောင်းသားများ နှင့် ကျောင်းသားများကို "မိသားစုများ ဆက်သွယ်။
လက်ထောက် ကျောင်းအုပ်ကြီး: တစ်ခုချင်း စီ ကို ကျောင်း က ကျောင်းအုပ် ကို ကူညီပေးပါ တဲ့ သူ တ ဦး တည်း သို့မဟုတ် ထို ထက် ပို လက်ထောက် ကျောင်းအုပ် ရှိပါတယ်။
ဆရာ، ဆရာမ စာသင်ခန်း ထဲမှာ ကျောင်းသားတွေကို သင်ကြား ပေး ကြသည်။ ဆရာ، ဆရာမ များစွာကို အမျိုးမျိုး ရှိပါတယ်:
စာသင်ခန်း ဆရာများ: သူငယ်တန်း ခုနှစ်တွင်5ဆင့် ကြိမ်မြောက် ကျောင်းသားများကို များသော အား ဖြင့် ကျောင်း တစ်ရက် အများစု အ ဘို့ မိမိတို့ စာသင်ခန်း ဆရာမ နှင့် အတူ နေထိုင်ရန် တန်း။ စာသင်ခန်း ဆရာမ များသော အား ဖြင့် ထိုကဲ့သို့သော စာဖတ်ခြင်း، သင်္ ချာ، လူမှုရေး လေ့လာမှုများ، နှင့် သိပ္ပံ အဖြစ် အများအပြား ကျောင်းမှ ဘာသာရပ်များ، သင်ပေး တယ်။
: အကြောင်းအရာ ဆရာများ အလယ်တန်း ကျောင်း မှာတော့ (အဆင့် 6-8) နှင့် အထက်တန်းကျောင်း (9-12) ، ကျောင်းသားများကို ထိုကဲ့သို့သော အင်္ဂလိပ်ဘာသာ စကား အနုပညာ ، သင်္ ချာ ، သိပ္ပံ ، လူမှုရေး လေ့လာမှုများ ، ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပညာရေး ، အဖြစ် အထူး သ ဖြင့် အကြောင်းအရာ ဧရိယာ ၌ အထူးပြု တဲ့ သူ ကွဲပြား ခြားနား သော ဆရာ ، ဆရာမ ရှိသည် အနုပညာ ، إلخ ...။
အင်္ဂလိပ်ဘာသာ ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ (ELD) ဆရာ، ဆရာမ: ELD ဆရာများ الاستماع والتحدث ဖတ်ရှု ခြင်း နှင့် စာ အရေးအသား အတွက် အင်္ဂလိပ်ဘာသာ စကား ကျွမ်းကျင်မှု အဖြစ် ယဉ်ကျေးမှု ဆိုင်ရာ အသိအမြင် ဖွံ့ဖြိုး ဖို့ စာသင်ခန်း နဲ့ အတူ အလုပ်လုပ်။
အထူး ပညာရေး ဆရာ: အထူး ပညာရေး ဆရာများ ကွဲပြား ခြားနား သော သင်ယူမှု، စိတ်ခံစားမှု နှင့် / သို့မဟုတ် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များ ရှိသည် သော ကျောင်းသားများ အ ထော ကျ ပံ့ ပေး။
ကျောင်းစာအုပ် န်ထမ်း များ
ဆရာ، ဆရာမ အပြင် လည်း အပါအဝင် ကျောင်းသားများ နှင့် မိသားစုများ ကို ကူညီ သူ ကို များစွာသော အခြား ကျောင်း ဝန်ထမ်းများ အဖွဲ့ဝင်များ ရှိပါတယ်:
ကျောင်း အကြံပေး: ကျောင်း တိုင်ပင် မှူး မတ် အတန်း ကို ရှေး ခ ယျြ နှင့် အချိန်ဇယား စေ အဖြစ် ၎င်းတို့၏ ، လူမှုရေး စိတ်ခံစားမှု နှင့် အပြုအမူ ဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များကို နှင့် အတူ ကူညီပေးနေ ကူညီ ، သူတို့ရဲ့ ပညာရေး လျှောက်လုံး ကျောင်းသားများကို အကြံပြု သည်။ သူတို့ က အ စ သင် က ကျောင်း နှင့် ရပ်ရွာ လူထုထောက်ခံမှု နှင့် အရင်းအမြစ်များ အကြောင်းကို ပိုမို သိရှိ လိုပါက احصل على ကူညီပေး နိုင်ပါသည်။
المدرسة တွင် သူနာပြု: အဆိုပါ ကျောင်းမှ သူနာပြု နေမကောင်း ဖြစ်ကြသည် သို့မဟုတ် ထိခိုက် စေ တဲ့ သူ ကျောင်းသားများကို ကူညီ ပေးသည်။
ကျောင်း နှင့် မိသားစု အရင်းအမြစ် အထူးကု (SFRS): ကျောင်း နှင့် မိသားစု အရင်းအမြစ် အထူးကု، လူမှုရေး အမျိုးမျိုးသော အပြုအမူ များ နှင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များ နှင့် အတူ ကျောင်းသားများ နှင့် မိသားစုများ ကို ထောက်ပံ့။ သူတို့ က အိမ်တွေ ကို သွားရောက်လည်ပတ် နှင့် ကျောင်း နှင့် ရပ် ရွာန် ဆောင်မှု မှ မိသားစုများ ချိတ်ဆက်ပြီး ထောက်ခံမှု နေအိမ် / ကျောင်း က ဆက်သွယ်ရေး ကူညီပေး နိုင်ပါသည်။
ကျောင်းစာအုပ် အရင်းအမြစ် အရာရှိချုပ် (SRO): SROs ကျောင်း က ခိုင်ခိုင် လုံ လုံ အပေါ် ကျောင်းသားများ က စောင့် ရှောက် ခြင်း နှင့် ဝန်ထမ်း လုံခြုံ ကူညီ သူ ကို ရဲ အရာရှိများ လေ့ ကျင့် သင်ကြား လျက်ရှိသည်။
အတွင်းရေးမှူး: အဆိုပါ ကျောင်းမှ အတွင်းရေးမှူး အဓိက ရုံး ထဲမှာ အလုပ်လုပ်တယ် နှင့် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ နှင့် ဆရာ ، ဆရာမ နှင့် အတူ မိသားစုများ နှင့် ချိတ်ဆက် ကူညီပေး နိုင်ပါသည်။ သူတို့ က အ စ သင့် ကလေး ကျောင်း သို့မဟုတ် ပျက်ကွက် ၌ တည် ရှိ၏ သည့် အခါ ခြေ ရာ ခံ စောင့် ရှောက် လိမ့် မည်။ သင့် ကလေး ကျောင်း မ ဖွ စျ ပါ မညျ လျှင် သင် ကျောင်း အတွင်းရေးမှူး သို့မဟုတ် တက်ရောက်သူ ရုံး ကို ဆက်သွယ် သင့် ပါတယ်။
တာဝန်များ مقابل မိဘများ ခ ငြ့်အရေး
အမေရိကန် ကျောင်း စနစ် အတွက် ကလေး တစ် ဦး နှင့် အတူ မိဘ တစ် ဦး အဖြစ် ، သ ငျ သ ညျ အခွင့်အရေး နှင့် တာဝန်ဝတ္တရား နှစ်ခု လုံး ရှိသည်။
သ ငျ သ ညျ ပိုင် ခွင့် ရှိသည်:
သင့် ကလေး ကျောင်း လုပ်နေတယ် ဘယ်လို သိ
ကလေး၏ ကျောင်း က အလုပ် နှင့် ပညာရေးဆိုင်ရာ တိုးတက်မှု နှင့် ပတ်သက်. ဆရာ ، ဆရာမ နှင့် အတူ ဖြ ည့်ဆည်း
သင့် ကလေး ကျောင်း သိတော့ အရာကို သိ
သင့် ကလေးကို တစ် ခက် အချိန် ကို မြင်လျှင် ရှိပါတယ် လျှင် ، အကူအညီတောင်း ကျောင်း မေး ပါ ကွား လြှငျ ، သို့မဟုတ် ကျောင်း အတွက် လေ့လာ သင်ယူ
သင်သည် ထို သူတို့ လက်မှတ်ထိုး မတိုင်မီ စာတမ်းများ အ ဘယ်သို့ ဆိုလိုသည် ကို ကျောင်း က ကို သိရ
ရ ရှိနိုင် ပါ နှင့် သင့် က လေးအတွက် ကူညီပေး နိုင်ပါသည် ဘယ်အရာ ကို ကျောင်းမှ အစီအစဉ်များ နှင့် လှုပ်ရှားမှုများကို သိရ
ကလေး ကျောင်းတွင် ဒုက္ခ ရရှိသွားတဲ့ နှင့် မည်သို့ ကျောင်း ဖြေဆိုသူ လျှင် သိ ကြ
ကျောင်းမှာ အစည်းအဝေးများ သို့ သွားရန်
ဆရာ، ဆရာမ သို့မဟုတ် ကျောင်း န်ထမ်း တွေနဲ့ တွေ့ဆုံ သည့် အခါ ဘာသာစကား အနက် န်ဆောင်မှု ကို ရယူ လိုပါသည်
သင်တို့ အ ဘို့ အ استجابة နေသော ခေါင်းစဉ်:
သူတို့ နေမကောင်း ဖြစ်ကြသည် မှ လွဲ. နေ့တိုင်း ، သေချာ သင့် ကလေးကို အချိန် ပေါ် ကျောင်းကို ဝင် အောင်
صنع သေချာ သင့် ကလေးကို နေ့တိုင်း ဟာ သူတို့ရဲ့ အိမ် စာ မ
صنع သေချာ သင့် က လေးသည် စင် ကြယ် ၏ အောင် ကျွေး ؛ သန့် ရှင်း သော အဝတ် ကို ဝတ်ဆင် လျက်، ကောင်းစွာ အိပ်။
သေချာ သင့် ကလေး ကျောင်း ပြုမူ ဖို့ ဘယ်လို နားလည်နိုင် နှင့် ဆရာမ ဖြင့် စည်း မျဉ်း စည်းကမ်းတွေ ကို အောက်ပါအတိုင်း ပြုလုပ်ခြင်း။ ဤ ရွေ့ ကား စည်း မျဉ်း စည်းကမ်းတွေ ကို ပါဝင် နိုင်ပါသည်:
ကလေးများ ဆရာ နားထောင်ရန် နှင့် ဆရာ က သူတို့ကို ပြောထားသည် အ ဘယ်အရာ ကို လုပ် ပါ။
သူတို့ က ပြောဆို ရန် မိမိတို့ လက် ကို မြှ င့ ်။
သူတို့ က လိုင်း အတွက် မတ် တပ် ရပ် နှင့် ကျောင်း အတွက် အတူတကွ သွားလာ ရ ကြ၏။
သူတို့ က ضرب သို့မဟုတ် မ တိုက် ပါဘူး။
သူတို့ က အခြား ကလေးများ ခြိမ်းခြောက် ပါဘူး။
သူတို့ က မကောင်းတဲ့ စကား များ မ သုံး ကြ ဘူး။
သူတို့ က အခြား ကျောင်းသားများ နှင့် အတူ အလုပ်လုပ် ကြသည်။
သူတို့ က လူတန်းစား ဖို့ အချိန် ပေါ် ဖြစ်ကြသည်။
သူတို့ဟာ သူတို့ရဲ့ အိမ် စာ ပြီးအောင် ပြန် ကျောင်းကို ဆောင်ခဲ့ ကြ။
အိမ်မှာ သင့် ကလေးကို ထောက်ပံ့
သ ငျ သ ညျ မိဘ တစ် ဦး အဖြစ် ، သင်သည် သင်၏ ကလေး၏ ဘာသာစကား နှင့် ပညာရေးဆိုင်ရာ တိုးတက်မှုကို ထော ကျ ပံ့ ကူညီပေး နိုင်သည် ကို ဘယ်လို ، အံ့ သြ လိမ့် မည်။ ဤတွင် အချို့ မဟာဗျူဟာ များ နေသော ခေါင်းစဉ်:
စိတ်ရှည် ပါ။ ဘာသာစကား တစ်ခုကို သင်ယူခြင်း ရှုပ်ထွေး ပြီး، ရေရှည် လုပ်ငန်း စဉ် ကို ကြောင်း နားလည် ပါသည်။
အသစ် တခု ဘာသာစကား မှာ သင်ယူခြင်း စွမ်းအင် အများကြီး ကြာ ပါသည်။ သင့် ကလေး ငြိမ် ဝပ် စွာ နေရသော ပဒေသာ ရရှိသွားတဲ့ ကြောင်း အာမခံ ပါသည်။
တိတ်ဆိတ် တဲ့ နေရာ အရပ် များ နှင့် အိမ် စာ နှင့် လေ့လာမှု လုပ်ဖို့ ပုံမှန် အချိန် ကို ဖန်တီး ပါ။
ကြောငျး မှာ ဘာတွေ ဖြစ်နေတယ် ဆိုတာကို အကြောင်းကို သင့် ကလေးကို ပြောဆို ပါ။
သင့် ကလေး၏ ဆရာ နှငျ့ ဆကျသှယျ နှင့် မိဘ ဆရာ ညီလာခံတွင် ပါဝင်။
သင်တို့ ရှိသမျှ သည် ကျောင်း အလုပ်ကို ပြ သ နိုင်ဖို့ သင့် ကလေးကို အားပေး ပါ။
သင့် အိမ် ဘာသာစကား ထိန်းသိမ်း ပါ။ နှစ်မျိုး ဖြစ်ခြင်း ဟာ အံ့ သြ စရာ ကျွမ်းကျင်မှု ပါ!
အတွက် သင့် ကလေး နှင့် အတူ اقرأ မ ဆို အင်္ဂလိပ် လို စာ တတ် မြောက်ရေး ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ကို လွှဲပြောင်း ခြင်း နှင့် ပံ့ပိုး ကူညီမည် နေအိမ် ဘာသာစကား မှာ စာ တတ် မြောက်ရေး။
မိသားစု နှင့် ရပ်ရွာ အရင်းအမြစ်များ
ဒုက္ခသည် စင်တာ မှ
အရွယ်ရောက် ပြီး သူ إد က / စာ တတ် မြောက်ရေး ကောင်စီ
က နျြး မာ ရေး ဆေးခန်း